alkisahkasih: Dongeng pinokio dalam bahasa Malagasi
Ankoatra ny fotoana lasa izay, ao amin'ny tanàna kely, nisy fivarotana mpanao saribakoly izay atao hoe Geppetto Dadabe. Ary nanao zanak'osy saribakoly iray hoe: "Tena mahafinaritra izany saribakoly mamy ankizy."
Indray andro rehefa avy ny dadabeny nanao ny saribakoly tamin'ny farany dia nibitsika "Raha nanana zazalahy aho dia ho lehibe". Noho izany, ny fahagagana nitranga. "Tsara tolakandro, Papa." Ny saribakoly nivadika ho toy ny olombelona sy niresaka ka handeha. Tamin'ny fotoana voalohany Taitra ny zava-nitranga. Fa rehefa afaka izany, dia nahatsapa tena faly. Ny raibeny hoe: "Misaotra an'Andriamanitra, Manomboka izao dia ho zanako. Aho hanome anareo ny anarana. Ny tsara indrindra no Pinocchio. "" Satria ianao zanak'osy manan-tsaina, dia hanomboka any an-tsekoly rahampitso! "
Ny ampitso maraina, Dadabe Geppetto nivarotra akanjo sy ny vola dia nividy Pinocchio ny ABC boky. "Afaka mianatra avy amin'ity boky ity. Izany no tsara ho anareo Pinocchio! "" Misaotra anao, Papa. Handeha aho any an-tsekoly, ary miasa mafy. "" Tandremo! "Hoy dadabe.
Ary raha Pinocchio nankany amin'ny sekoly izy no mifanohitra, dia lasa izy nankany toromarika hafa dia nahita ny sekoly ny feony, "Drum, dum, dum, dum." Izy liana momba izany ary te-handeha ao. Nefa tsy ampy ny vola. Pinocchio dia nivarotra ny ABC boky, mividy tapakila amin'ny vola sy ny hiditra ao. Ao ny milalao trano lay, saribakoly ankizivavy ho fahirano miaramila sabatra. "Indro, Miaramila ratsy rehetra.
"Pinocchio nandray ny sehatra, ka nidona saribakoly miaramila. Tady nanana tapaka saribakoly sy ny saribakoly nianjera. Natao ny Tompon'ny tezitra avy hatrany niezaka nisambotra Pinocchio ka te hanipy azy ao anaty afo. "Miala tsiny aho. Raha izaho no may, miala tsiny taloha Dada, "hoy Pinocchio. Pinocchio izany tahotra. Hoy izy hoe "ilay nolazaiko tamin'i Papa ny mianatra any am-pianarana amim-pahazotoana. Masìna ianao, mamelà ahy! "Ny tompony nahatsiaro ho malahelo, dia hanome azy vola madinika vitsivitsy. "Fotsiny handeha sy hampiasa izany vola mba hividianana ny lesona boky." Hoy ny tompon-milalao.
Ary Pinocchio lasa nividy ny boky. Fa teny an-dalana, Fox sy Cat nahita ny toe-javatra. Izy ireo niarahaba tamin'ny Pinocchio sariaka. "Tsara tolakandro, Pinocchio tsara. Raha ny volamena dia nitombo tokoa ny rainao dia faly ?! "
Ahoana no fomba hametraka ity vola volamena? ", Hoy Pinocchio. "Easy .... Afaka mametraka azy ao ambanin'ny hazo ny majika. Ary avy eo vao matory, ka raha mifoha ianao, ny hazo dia mamoa be ao anatin'izany ny vola. "Ary Pinocchio nanatitra ny Fox sy ny Cat, vola ny vola eo ambany volamena amin'ny hazo majika. Rehefa nanomboka haka Pinocchio hatory. Amboahaolo sy ny saka nihady volamena, ary ahantòny amin'ny hazo Pinocchio, dia hamitaka azy sy vao nandeha.
"Masìna ianao, ... .." niantso Pinocchio, rehefa nifoha izy ka nahita izy mihantona amin'ny hazo. A andriamanibavy, izay nahita ny fanjakan'i Pinocchio, dia naniraka ny voromahery mba hanampy azy. Eagle nitondra Pinocchio ny vavany, ka nitondra azy ho any amin'ny efi-trano, andriamani-bavin'ny izay efa niandry. Andriamanibavy lull Pinocchio am-pandriana, ary nanome azy fanafody.
Eny, naka fanafody io dia hahazo tsara kokoa ho ela. Rehefa afaka izany, dia niverina ho andriamanibavy ka hoy izy: "Aleo maty toy hisotro ny mangidy fanafody." Pinocchio foana tsy mety. Farany Goddess Tezitra, "Takelaka takela-pahatsiarovana!" Ary namely tahamaina. Dia tonga bitro efatra izay nitondra ny vatam-paty. Pinocchio Gaga mihitsy, dia haingana nisotro ny mangidy fanafody. "Pinocchio, nahoana no tsy mba nandeha am-pianarana?", Hoy ny andriamanitsika. "Hmm .. teny an-dalana, dia nivarotra ny boky ho mahantra ankizy izay noana sy nividy hanina ho azy. Koa izany no tsy afaka mandeha any an-tsekoly .... "Tampoka teo" syuut "ny orona Pinocchio nanomboka elongate. "Pinocchio!" Raha mandainga, ny orona no naninjitra ny lanitra. "" Miala tsiny aho. Tsy handainga intsony. "Pinocchio Niala tsiny. Nitsiky andriamani-bavy, ka nandidy ny woodpecker amin'ny Pinocchio pecking ny orona, hamerina azy ho any amin'ny tany am-boalohany endrika. "Miverena any an-trano, ary ny fianarana any an-tsekoly!"